သုတေသန - ဝီကီပီးဒီးယား
သုတေသန (အင်္ဂလိပ်: research) ဆိုသည်မှာ သိုမှီးစုဆောင်း ရရှိထားသော ဗဟုသုတများစွာကို တိုးပွားစေရန်အလို့ငှာ ပြုလုပ်သည့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိ၍ စနစ်ကျသော အလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သုတေသနတွင် ပြဿနာ (သို့) အကြောင်းအရာတစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ နားလည်မှု ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာစေရန် သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ စနစ်တကျ စီမံခြင်းနှင့် အသေးစိတ် လေ့လာသုံးသပ် စိစစ်ဝေဖန် ပိုင်းခြားခြင်းများ ပါဝင်သည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် နယ်ပယ်တစ်ခု၌ အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့သော (သုတေသန)လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ချဲ့ထွင်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်းအရာတစ်ရပ် (သို့) ပညာရေးအတွက် ဗဟုသုတအသိပညာများကို ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးစေရန် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ စမ်းသပ်မှုများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကိရိယာများ၏ ကြောင်းကျိုးခိုင်လုံမှုကို စစ်ဆေးစမ်းသပ်ရန် ယခင်ပြုလုပ်ဖူးသော သုတေသနလုပ်ငန်းမှ အစိတ်အပိုင်းအချို့ (သို့) တစ်ခုလုံးကို ပုံစံတူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပေသည်။
(သိပ္ပံပညာရပ်)အသုံးချသုတေသန (applied research) နှင့် မတူဘဲ အခြေခံသုတေသန (basic research) ၏ မူလရည်ရွယ်ချက်များမှာ လူသားတို့၏ အသိပညာများ တိုးတက်နိုင်ရေးအတွက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ လေ့လာစူးစမ်းခြင်း၊ အနက်ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် စနစ်၊ နည်းလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ ဖြစ်သည်။ သုတေသနပြုရာတွင် ချဉ်ကပ်ပုံနည်းလမ်းများသည် 'အသိပညာ ဘာသာရပ်များ' (epistemologies) ပေါ်တွင်မူတည်ကာ ချဉ်းကပ်ပုံများသည် လူမှုဘာသာရပ်များ[မှတ်စု ၁] (humanities) နှင့် သိပ္ပံဘာသာရပ်များကြား သော်လည်းကောင်း ထိုတူညီသော ဘာသာရပ်များအတွင်း၌သော်လည်းကောင်း လွန်စွာ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သုတေသန ပုံစံအချို့ရှိ၏ ။ ၎င်းတို့မှာ သိပ္ပံ၊ လူမှုဘာသာရပ်များ၊ အနုပညာ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုဆက်ဆံ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေး၊ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ၊ ဘဝ၊ နည်းပညာ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သုတေသနလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် metascience (သို့) meta-research ဟု သုံးနှုန်းသည်။
သုတေသနသည် ပါဠိဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာပြီး သုတ (အကြားအမြင်) နှင့် ဧသနာ (ရှာမှီးခြင်း) တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား research သည် အလယ်ခေတ် ပြင်သစ်ဘာသာစကားမှ "recherche" မှဆင်းသက်လာကာ ရှာဖွေထွက်ခြင်း အနက်ရရှိသည်။ ယင်းစကားလုံးမှာလည်း ရှေးဟောင်း ပြင်သစ်ဘာသာ ဝေါဟာရ "recerchier" မှဖြစ်၍ re- နှင့် "cerchier" (သို့) "sercher" (ရှာဖွေ) တို့ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဝေါဟာရကို အစောဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည့် မှတ်တမ်းမှာ ၁၅၇၇ ၌ ဖြစ်သည်။
↑ လူမှုဘာသာရပ်များဆိုသည်မှာ ဒဿန၊ ဂီတ၊ စာပေ၊ အနုပညာဘာသာရပ် စသည်တို့ဖြစ်သည်။
↑ OECD (2015)။ Frascati Manual။ The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities။ doi:10.1787/9789264239012-en။ ISBN 978-9264238800။
↑ "The Origins of Science Archived3March 2003 at the Wayback Machine.". Scientific American Frontiers.
↑ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၊ သုတေသနထုံး၊ စာမျက်နှာ= ၈-၁၀။
↑ Research။ Merriam-Webster, Inc.။ 20 May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သုတေသန&oldid=674063" မှ ရယူရန်
၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၉:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၉:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။